Pireezidantii OSA Beenyaa Dhugaasaa (PhD): 'Dr. Abiy akka Oromootti yaaduun sirra jira' - BBC News Afaan Oromoo
Pireezidantii OSA Beenyaa Dhugaasaa (PhD): 'Dr. Abiy akka Oromootti yaaduun sirra jira'
Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA'n) Ministirri Muummee Abiy Ahmad (PhD) mootummaa sirnoota durii (gonfoo) leellisuun finxaaleyyiin ija akka jabaatan gochuun biyyattii keessa nagaan akka dhibu taasisan jechuun himate.
Dhaabbanni waggoota 30 darbanif dhimma siyaasaafi diinagdee ummata Oromoofi kaan qorataa jiru kuni, xalayaa fuula afur MM Itoophiyaaf barreessuu isaa ibseera.
MM Abiy erga gara aangootti dhufanii waan dansaa hedduu dalaganillee mootummaan isaanii Oromoof nagaa hin fidne jechuun ibsa xalayaan kuni.
Xalayaa kuni adeemsaafi haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru qeeqa, gaaffiiwwan Oromoo deebi'uu qabaniif waan MM Abiyyi Ahimad raawwachuu qaban eera.
BBC waliin turtii kan taasisan Pirezidantiin waldichaa Beenyaa Dhugaasaa (PhD), haalli hammaataan waan mudatef ibsa kana amma baasne jedhu.
'Dr. Abiy warra finxaaleeyyiif carraa bane'
''Uummanni Oromoo fi Itoophiyaa MM Abiy Ahimaditti yeroo amma jiru kana akka nuu ceesisuuf amantaa itti kennan. Dogongora guddaatu tahe, tahaas jira.
Yaada finxaaleeyyii, namoonni finxaleyyiitti akka isaan yaadan warra dhufantu jiru. Keessumaa uummata Amaaraa warri dura buuna warri jedhan, olaantummaa durattii, akka Minilikiitti yaadanii uummata biyya sanaa deebisanii akka duraanitti bituudhaaf, warra yaadantu dhufaa jira.
Warra akkasitti yaadaniif carraa bane natti fakkaata.
Wanti ammarraa jalqabamee yoo [to'atamuu] baatee biyya sanarra balaa guddaatu dhufuuf mala.
Jibba uummata, hawaasaa fi amantaa tokkorratti balaaleeffannaan daddabalee mullachaa jira. Yeroo dabre uummata Gumuuz ajjeesanii, jaldeessan ajjeesne jedhanii isaan bahanii wayita dubbatan, kun qaanii guddaadha.
Irreecha Finfinneerra kabajamerratti 'Waaqeeffannaa seexanaa fi kanneen biraa jechaa turan.
Yeroo kana mootummaan namoota waan akkasii barreessan kana seeeratti adabsiisuun isarra ture - kun garuu tahuu hin dandeenye.
Ammas gara fuuladuraatti akka huin dhufneef kana dhaabuun barbaachisaadha.''
Kora OSA'n yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti gaggeefatee kaleessa xumure irratti Afaan qorannooleen itti dhiyaachaa...
Posted by BBC News Afaan Oromoo on Monday, 29 July 2019
Minilik saboota kaaniif akka haadhaatti kan ilaalamu yoo tahu, kaaniif ammoo hammina isaatiin yaadatama,'' jedhu Dr. Beenyaan.
Kana malees MM Abiy mootota duraanii leellisuufi siidaa dhaabuun isaanis sirrii miti jechuun mormu.
''Nama uummanni ija adda addaatiin ilaalu kan fuudhee akka gootaatti ennaa kaasuu, uummanni akka haadhaafi gootaatti isa ilaalu, yaadasaa sana fudhatee goota tahee bahuudhaaf as bahaa jira.''
''Kanaafuu dubbii kana qabaneessuutu isinirra jira ergaa jedhuun dabarse,'' jedhu pireezidantiin waldichaa.
Dr. Beenyaan rakkoolee kanneeniif fala kan jedhanis akka kanatti dubbatu:
''Akka Oromootti yaaduun dirqama siif tahan jedhaani. Kunis waa ifa gochuu - Oromoon waan barbaade sitti hima. Hawwiisaa sitti himata.
Tolee yoo jedhe tole jechuudhuma. Lakkii yoo jedhes lakkiidha.
Garuu warri kaan tole siin jechaa, waan biraa si godhu. Kanaafuu akka Oromootti yaaduun dirqama keeti, kan achi si geesse uummata Oromooti waan taheef.''
Kana malees, xalayaa Afaan Ingiliffaan barreeffame irratti wantoota fala taha jedhaman akka raawwatan Ministira Muummichaa gaafataniiru:
Gaaffilee Oromoo deebisuu fi fedhii isaanii guutuu
Hidhamtoota siyaasaa hunda gadhiisuu fi kanneen hidhamaniifi ajjeefamaniif beenyaa baasuu
Namoota ajjeessaa fi dararaa kan turan seeratti dhiyeessuu
Komaandi Poostii Lixa, Kibbaafi Giddugala Oromiyaa jiru kaasuu
Aangoo keetti fayyadamtee paartilee siyaasaa fi jaarmiyaalee Amhaaraa finxaaleeyyii tahan irratti tarkaanfii fudhadhu
Partileen siyaasaa uummata wajjin akka hojjetaniif dirree siyaasaa walqixa uumuu
Haasawa jibbaa haala miidiyaa walabaa hin miineen adabuu